कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामाको घो’षणा ! – Nepal Online Khabar
साउन २९, २०७८ शुक्रबार 240
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीले वि’भेदकारी नीति बनाएको भन्दै सामूहिक राजीनामाको घो’षणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने घो’षणा गरेका हुन् ।
पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापति स्वतस् म’हाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य भने महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन वडाबाट चुनाव ल’डेर आउनुपर्ने नीति नै वि’भेदकारी रहेकोले सच्याउन द’बाब दिन सामूहिक राजीनामा घो’षणा गरेको बताइएको छ ।
सामूहिक राजीनामा दिने आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरुमा अभिषेख प्रताप शाह, राजेन्द्रबहादुर सिंह, नन्दनकुमार दत्त, आनन्द (गोरख) विष्ट, कृष्णकिशोर घिमिरे, ध्रुव वाग्ले, दयाराम पाण्डे, जनकराज कलौनी, मोहनसिंह राठौर, बालकृष्ण पाण्डेय,
सुधीरकुमार शिवाकोटी, नरेन्द्रकुमार चौधरी, शम्भुलाल श्रेष्ठ, आशाराम चौधरी रहेका छन् । त्यस्तै, अन्य सदस्यहरुमा रमा कोइराला पौडेल, दिलीप राई, कुमार खड्का, भूमिबहादुर (विश्व) गुरूङ, मनोहरनारायण श्रेष्ठ, किरणराज शर्मा पौडेल, गोपालकुमार बस्नेत, हसन अन्सारी रहेका छन् ।
Prevखेत खन्दा माटोको भाँडो भेटियो खोलेर हेर्द सबै चकित !
Nextइलाममा थप ५१ जनामा को’रोना पुष्टि, २ सं’क्रमितको मृ’त्यु !
प्रधानमन्त्रीलाई दुर्गा प्रसाईंले भने-‘बिएन्डसी चलाउ कि बन्द गरौँ ?’
इलाममा थप ५१ जनामा को’रोना पुष्टि, २ सं’क्रमितको मृ’त्यु !